နှစ်ချို့ကော်ဖီ: December 2007
တစ်ခုခုရေးရမှာပဲလား စာတွေအများကြီးရေးပါဆိုတဲ့ စာတိုလေးတစ်ကြောင်းနဲ့ရောက်လာတယ်… ငါ့ကိုယ်ငါမသေချာတော့တဲ့လူတစ်ယောက် လူ့ဘ၀ဟာထောင်ချောက်တစ်ခုနဲ့တူတယ် အနုပညာလားဘ၀လား…. ငါဘာမှမရခဲ့ဘူးဆိုရင်…. ဖေဖော်ဝါရီရယ်…. အစစအရာရာနုံချာခဲ့ဖူးတဲ့ငါလေ ကဗျာလို့ရေရွတ်မိကတည်းက သန့်စင်ထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့ နှစ်ကာလတွေမှာထုထည်ဖွဲ့နေထိုင်လို့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင် မိုးသားတွေသိပ်သိပ်သည်းသည်း ရွာသွန်းတဲ့ညနေခင်းတစ်ခု ငါ့ရင်ထဲမှာအမှတ်ရစိုစွတ်နေလိမ့်မယ်….။ မိုးလှိုင်ည (ဖေဖော်ဝါရီရေ မင်းပို့ပေးလိုက်တဲ့၂၀၀၈ ဒိုင်ယာရီလေးလက်ခံရရှိပါတယ် အမှတ်ရနေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…နောင်နှစ်တွေကျရင်တော့ မပို့ပါနဲ့တော့ ငါအသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့မသေချာသလို ကဗျာတွေရေးနေဖြစ် မယ်ဆိုတာလည်းမရေရာလို့ပါ….နှစ်သစ်မှာပျော်ရွှင်ပါစေ) Posted by
ကဗျာအခက်ကြီးတစ်ပုဒ်ရေးဖြစ်တယ်လို့ တစ်ချိန်ချိန်မှာအိပ်မက်ခဲ့ဖူးတယ်... ပညာတတ်တွေနားမလည်နိုင်တဲ့ စကားလုံးတွေ နဲ့ အဓိပါယ်တွေ ပညာတတ်တယ်လို့ထင်နေသူတွေမသိနိုင်တဲ့ အခွံ့ချည်းသက်သက်ကဗျာကြီးတစ်ပုဒ် ဘုန်းတော်ဘွဲ့တွေမဟုတ် ခေတ်ပေါ်ညည်းချင်းကဗျာမဟုတ် လိင်ကိစ္စအသားပေးဝတ္ထုတွေလို အသွေးအသားတွေကို ဆူပွက်စေမယ့်စကားလုံးတွေမဟုတ် လူပြိန်းတစ်ယောက်ရဲ့ အားအားယားယားအနုပညာတစ်ခုသာ ဖြစ်လိမ့်မယ်... ဘာသာစကားဘယ်နှစ်မျိုးသုံးစွဲထားသလဲ ၀ါကျတွေသဒ္ဒါပျက်နေသလို သတ်ပုံတွေဘယ်လောက်တောင်မှားယွင်းနေမလဲ မလိုအပ်ဘူးထင်တယ်... ဦးနှောက်နဲ့ နှလုံးသားကိုမထိခိုက်စေပဲ ကဗျာကိုပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖတ်ပါ... ကျွန်တော်တော့နည်းနည်းပြိန်းတယ်...။ မိုးလှိုင်ည
တိမ်တွေက စိမ်းလန်းမှုကိုမှ ရွာသွန်းချင်သတဲ့လား… သမိုင်းတစ်ခေတ်လုံး မိုးခေါင်ခံထားရ…. ငါက ကန္တာရတစ်စင်းလေ…။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထနောင်းပင်တွေလို ချွှန်မြထားရတယ်….။ မရွာပဲထစ်ချုန်းဖူးတဲ့မိုးသားတွေကြောင့်တော့ တုန်လှုပ်ခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူး…။ အပူလှိုင်းတွေလောင်မြိုက် အအေးဓါတ်တွေဖွဲ့သိုင်းလို့ အကြိမ်ကြိမ်ကွဲအက်ခဲ့ရတယ် ငါ့ရဲ့ပြန်မလာဖြစ်တဲ့မိုးရာသီလေးရေ မင်းကိုလွမ်းမိတဲ့ခဏပဲ ငါ့ဆီမှာပန်းပွင့်ပါတယ်….။ မိုးလှိုင်ည
လိုချင်မှုက ငါ့ခေါင်းထဲမှာအရင်နေရာယူထားတော့ လောလောဆယ် တီတစ်ကောင်ရဲ့အသက်ကို ငါစသတ်လိုက်တယ်။ ရေထဲမှာ ဖော့တံလေးငြိမ်လို့။ ငါက နောက်ထပ်အမှာကို စောင့်နေသူလား မာယာများတဲ့ ငါ့ ငါးမျှားချိတ်မှာ အာခေါင်စူးပြီး ပါလာဦးမယ့်ငါးများ ဒီအတွေးစ၀င်တော့ ကြောက်စိတ်နဲ့ တဆတ်ဆတ်တုန်လာတဲ့ငါ့လက် ၀ုန်းခနဲ ထရပ်လိုက်မိတဲ့ ငါ့ခန္ဒာ။ ပြီး ရေထဲမှာရောက်နေတဲ့ငါ့အရိပ်က ရေထဲမှာ ငါချထားတဲ့ ငါးမျှားချိတ်ကို ရှောင်လို့။ ဒုတိယအမှားကို မစခင် ကိုင်ထားတဲ့ ငါးမျှားတံကို ရေထဲပစ်ချပြီး ငါပြန်လာခဲ့တယ်….။ ထွဏ်းသွေးအိမ် (၂၀၀၂၊ စက်တင်ဘာ၊ people) Posted by
ကောင်းကင်တစ်ခုလုံးလင်းချင်းနေလိုက်တာ တစ်ယောက်ယောက်ကစကားစရမှာလား.. ပြီးပြည့်စုံသွားပါပြီ…။ နှလုံးသားထဲစိုက်ဝင်နေတဲ့ အနုပညာနဲ့ ငါ…ကဗျာရှာခဲ့တယ် အလှတရားကိုရှာခဲ့တယ်…သစ္စာကိုရှာခဲ့တယ် တချို့ကတော့အရှုးတဲ့ တချို့ကတော့ထော်လော်ကန့်လန့်ကောင်တဲ့ တချို့ကတော့ ကလေကချေပါတဲ့ ထိုးကြတဲ့လက်ညှိုးတွေကြားမှာ မင်းနဲ့ငါစူးစိုက်မိတဲ့မျက်ဝန်းချင်း ဖေဖော်ဝါရီရယ်… လက်ဘက်ရည်ကျစိမ့်နှစ်ခွက်အတူတူမှာသောက်မိတယ် မင်းလည်းအပြောင်းအလဲတွေကြားမှာချောင်ပိတ်လို့ ငါလည်းမာနတွေနဲ့အထီးကျန်သွေ့ခြောက်လို့ ဒီမနက်ခင်းလေးကိုရောက်ခဲ့မိတာပဲ ငါ့ရင်ဘတ်မြိုပျက်ထဲမှာ ခြေခင်းလက်ခင်းသာတဲ့နေ့ပေါ့…။ မိုးလှိုင်ည
ငါ့ကိုအုတ်ဂူထဲက ထုတ်ယူလာကြတယ် … ။ ခွဲစိတ်ကုသဖို့လား ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးနဲ့ ငါ့ကိုသတ်တဲ့ဆဲလ်တွေကို ဖယ်ရှားဖို့လား ကလုံးနင်းနဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့ အတွင်းကလီဇာတွေကို တပ်ဆင်ကြတယ် နံရိုးတွေကို အသားအစားထိုးတယ် အကြောတွေနဲ့ ပတ်တယ် … အရေပြားတွေ ကပ်တယ် … ပြီးတော့ ငါ့ကို ငါလို့ အတ္တတစ်ခု တပ်တယ် … အောင်မြင်သွားပြီ … လူသေကို ပြန်သေခိုင်းချင်လို့ကြိုးစားတဲ့ အင်ဂျင်နီယာတစ်ဖွဲ့လုံး လက်ခုပ်လက်ဝါးတီးတယ် ၀ိုင်ပုလင်းတွေကို ခွဲစိတ်ခန်းထဲမှာတင် ဖောက်သောက်ကြတယ် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်က ငါ့ကို လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တယ် ခင်ဗျားက သိပ်ချမ်းသာတဲ့လူဗျာ အခု ခင်ဗျားအသက်ပြန်ရှင်ခွင့်ရပြီ ကျွန်တော်တို့သုတေသန ကုန်ကျစရိတ်တွေကို လူကြီးမင်းထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့ မျှော်လင့်တယ် … လို့ ပြောတယ် သေစမ်း နန္ဒိယ ငါ့ခံတွင်းထဲမှာ ဆင့်ငါးဆယ်တန် အကြွေတစ်ပြားပဲ ပါတယ် ငါက နှစ်ဆယ်ရာစုမှာ စားပွဲထိုးတစ်ယောက်အနေနဲ့ အလုပ်အကျွေး ပြုခဲ့သူတစ်ယောက်ပါ ခင်ဗျားတို့ လူမှားသွားပြီ … ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ လူချမ်းသာအတွက် ကိုယ်စားသေပေးခဲ့တာ အဲဒီလူက ကျွန်တော့်ကျန်ရှိတဲ့အသက်ကို ယူပြီး အင်္ဂါဂြိုလ်ကို ပြောင်းရွှေ့သွားပြီ … ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော့်ကို ပြန်ပေးမဆွဲနဲ့တော့ အခုပြန်သေပေးတော့ … ။ မိုးလှိုင်ည
သံသရာသောင်ကမ်းတစ်လျှောက် ဘယ်လောက်တောင်ရေမျောသီး ဖြစ်ခဲ့ရလည်း……… ကိုယ့်ကိုထုထောင်းတဲ့လောကဓံကိုမှ တပ်မက်စိတ်နဲ့မျော်မိတယ်… ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်ပါ အဖြေမှန်မရခင်စပ်ကြားမှာ အမှားတွေဖြေနေကြ မေးခွန်းကဖြေဆိုစရာမလိုဘူးတဲ့ ကိုယ်မသိလို့ငြိမ်နေမိတာမရှိဘူး ရေမျောသီးရဲ့ကမ်းကခဏခဏခွာခဲ့တယ် ဒါပေမယ့်ဘယ်ကိုမှမရောက်ခဲ့ပါ…။ မိုးလှိုင်ည
အိပ်မက်တစ်ခုတော့မက်ဖြစ်အောင်မက်မှဖြစ်မယ်အသံတစ်ခုကိုအိပ်ယာဘေးမှာထားပြီးနေ့တိုင်းအိပ်ရတယ်အရောင်မရှိတဲ့ရထားတစ်စီးကိုစီးဖြစ်တယ်ဒါပေမယ့်သူ့မှာအသံတွေအပြည့်ရှိနေတယ်လေ။စက်တစ်ခုကိုထိန်ကျောင်းတတ်ရုံနဲ့ဘ၀တစ်ခုကိုအရဲစွန့်ပြီးစမိတယ်၊အဲဒီစက်ကဖြစ်နိုင်ခြေတွေအများကြီးနဲ့တည်ဆောက်ထားတာ အခုအချိန်မှာတိမ်တစ်စုံကိုသာစိတ်လိုလက်ရစီးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ပျံဝဲစရာနေရာတစ်ခုကိုအဆင်သင့်တွေ့ထားပြီးသားဥပမာဗျာ....လက်ငါးချောင်းကနောက်ထပ်လာတဲ့လက်အပိုတစ်ချောင်းကိုအတင်းငြင်းဆန်သလိုမျိုးပဲ ခင်ဗျားသဘောပေါက်ပြီလားတဲ့...(ကျွန်တော့်အထင်တော့ကျန်တဲ့တစ်ခြမ်းကလက်ငါးချောင်းရဲ့သဘောကိုမေးစမ်းကြည့်သင့်တယ်॥ထင်တယ်ဗျာ...ထင်တယ်)တစ်ခါတုန်းကကြားဖူးတယ်တစ်စုံဆိုရင်တစ်ယောက်မဖြစ်ဘူး တစ်ယောက်ဆိုရင်လည်းတစ်စုံမဖြစ်ဘူးတဲ့....တစ်ယောက်တည်းဖြစ်ဖူးတဲ့တစ်စုံဘ၀ကိုဘယ်မေ့ပါ့မလဲ...အစနဲ့အဆုံးကြားမှာနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဖြည့်တွေးကြည့်တယ်.... ကဲဘာကျန်တော့မှာလဲ....သာယာတဲ့ညချမ်းတစ်ခုအတွက်နဲ့ မနက်စောစောလမ်းထလျှောက်တတ်တာခင်ဗျား၊ကျွန်တော်၊ပြီးတော့၊ဆိုပါစို့ဗျာအဲဒီလူသားတွေပေါ့လမ်းတစ်ခုကိုဖြတ်ကူးအပြီးမှာပြန်လာဖို့ကတော်တော်ကြီးကြာဦးမှာ...ကံပါဗျာအဓိပါယ်ဆိုတာရှိတုန်းကသာရှိခဲ့ဖူးတာပါ၊နောက်တော့လဲ....အဲဒါမဖတ်ဖြစ်သေးတဲ့အဘိဓါန်တစ်အုပ်ကိုအိပ်ယာဘေးမှာအဲဒီအိပ်ယာ....ဘေးမှာပဲထားပါတော့လေ...အိပ်မက်တစ်ခုတော့မက်ဖြစ်အောင်မက်ချင်သေးတယ်ပေါ့.......ကိုရဲ(မြန်မာအိုအေစစ်ဘလော့မှကူးယူဖော်ပြပါသည်)(ကဗျာအတွက်ရေးသားသူ ကိုရဲ နှင့် မျှဝေပေးတဲ့ ကိုပွတ်တိုကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်)
မိသားစုမရှိ ဘ၀မရှိ…အနာဂတ်မရှိ သူငယ်ချင်းမရှိ…ချစ်သူမရှိ အိမ်မရှိ…ကားမရှိ လက်ကိုင်ဖုန်းမရှိ…ပီစီမရှိ အနုပညာမရှိ… ကျော်ကြားမှုမရှိ…လူရာဝင်မှုမရှိ မေတ္တာတရားမရှိ…ပိုက်ဆံမရှိ မနက်ဖြန်မရှိ…မနေ့ကမရှိ အရာအားလုံးမရှိတဲ့နောက် ငါ့ဆီမှာမရှိခြင်းတွေရှိလာတယ် ငါ…ဆိုတာမရှိခြင်းပဲ…။ မိုးလှိုင်ည
ကွန်ပြူတာဂိန်းစွဲလန်းလွန်းတဲ့ငါးတွေမှာအယ်ဇိုင်းမားရောဂါပြန့်ပွားနေပြီတဲ့ငါးအစစ်တစ်ကောင်ဟာ ပင်လယ်ထဲမှာမရှင်သန်နိုင်လို့အရေးပေါ်ကယ်တယ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းသူမနဲ့ချိန်းထားတာကစကြာဝဠာစံတော်ချိန် 100079ဝေါလ်ဝှိုက်ဝဘ်ပ် ဒေါ့ ၀ဲလ်ဒင်း ဒေါ့ နတ်က်အကြီးကျယ်ဆုံးအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုကနေလက်ထပ်ပွဲတစ်ခုကျင်းပနေတယ်…။သတို့သားက ဆွန်ဇူးမျိုးဆက် တီမြစ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးကူဗလိုင်ခန်နဲ့ဆွေမျိုးနီးစပ်တော်စပ်သူစက်တပိုင်းလူတွေအတွက်ယူရေနီယံချွင်းဂန်းထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့မန်းအောဖ်သည်မက်စ် 20025သတို့သမီး ဂျူပီတာမှာအခြေချနေထိုင်တဲ့စပိန်မျိုးနွယ်သူဖက်ရှင်မယ်…အိမ်ထောင်သားမွေးမှုကို နှစ်ဘက်ကုပ္မဏီများအသေးစိတ်ဆွေးနွေးကြပြီး….သမ္မာကျမ်းစာထဲက မီးနဲ့ဆေးကြောတဲ့အထိမ်းအမှတ်နေ့မှာ လက်ထပ်ပွဲကိုဂလက်ဆီကွန်ယက်ကဂြိုလ်ကြီးကိုလုံးကိုတိုက်ရိုက်ပြသနေတာပျင်းပျင်းနဲ့ထိုင်ကြည့်နေတုန်း5.4.3.2.1.0 Acceptသူမရဲ့ခေါ်ဆိုမှုကိုလက်ခံလိုက်တယ်…မေတ္တာတရားနဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေဆီချိန်ရွယ်တော့ဆောရီးပါ….ယူရို (၇) သိန်းတန် အာရုံခံကိရိယာကိုကျွှန်မလျှာမှာတပ်ဆင်ထားပြီးပြီစိတ်ကူးလိုက်ရုံနဲ့ရှင့်အနမ်းတွေကျွန်မရရှိနိုင်မှာရှင်လည်းတစ်ခုလောက်ဆောင်ထားသင့်တယ်…သွားပြီ…။အနမ်းတွေရဲ့အကြည်ဓါတ်မရရှိနိုင်တော့ဘူးကဗျာဆရာမှာ ၀င်ငွေမရှိတာထောင်စုနှစ်သုံးခုရှိပြီ…စိတ်ပြေလက်ပျောက် မော်နီတာတွေပေါလောမျောနေတဲ့ ကမ်းခြေဘက်လမ်လျှောက်ထွက်လိုက်တော့ဟင်းစားရမလားလို့ မျှားကြည့်တဲ့ပင်လယ်မှာMotherboard တွေအနည်ကျလို့….။်မိုးလှိုင်ည
ခရီတစ်ဆုံး မျော်ခေါ်လိုက်တိုင်း နွမ်းကြေသွားတဲ့မျော်လင့်ချက်တွေ… အိပ်မက်တွေပြန်မပြောကြေး ဒဏ်ရာတွေအံကြိတ်နေခဲ့တာတောင် အမေ…. ကျွန်တော်ငိုနေတာကို ဘာလို့ကြိုသိနေရတာလဲ…ဟင် နှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်ပျံသန်းလာတဲ့ခရီးမှာ ကျွန်တော်နာမည်ဟာ အရင်လိုမာကျောတုန်းပဲ..အမေ.. လောကကြီးနဲ့ကျွန်တော်အသားမကျဘူး…။ လမ်းပေါ်မှာ လေလွင့်နေတဲ့ကျွန်တော် ကဗျာစာအုပ်တစ်အုပ်နဲ့တစ်ညလုံး တိတ်ဆိတ်နေလိုက်တယ်… ရာစုသစ်ကြီးခေါ်တာတောင် ကျွန်တော်ပြန်မထူးမိဘူး…..။ မိုးလှိုင်ည Posted by
ညီလေးရေ… အရင်တစ်ပတ်ကပဲ အဖေ ဆုံးသွားပြီ မင်းလည်းဘာမှသိပ်တတ်နိုင်မယ်မထင်လို့ ငါမင်းကို အခုမှအကြောင်းကြားဖြစ်တာပါ ဆေးရုံကလည်းသေတော့မှ ရောဂါတစ်မျိုးမျိုးတပ်ပေးလိုက်တာပဲ… ကိုကျော်သူရဲ့ နာကူ နဲ့ပဲသဂြိုင်္လ်လိုက်တယ် ဆင်းရဲသားထုံးစံပေါ့ကွာ… ရက်လည်ဆွမ်းသွပ်လည်းပြီးပြီ မင်းလည်းစိတ်မပူပါနဲ့တော့…။ ဒါနဲ့ မင်းနိုင်ငံခြားထွက်ဖို့ ပေါင်ထားတဲ့အိမ်လည်းဆုံးသွားပြီ… အခု အမေရယ်ငါရယ် တစ်ဖက်ရပ်အဖီလေးတစ်ခုငှားနေတယ်.. အိပ်ရာလိပ်ရယ် အ၀တ်အစားသုံးလေးစုံပဲရှိတဲ့ ငါတို့သားအမိအတွက် အခုနေတဲ့နေရာကချောင်ချိပါတယ် အိမ်ပြန်ရွေးဖို့အတွက် မင်းပိုက်ဆံတွေမစားရက်မသောက်ရက်စုနေမှာဆိုးလို့ ငါအသိပေးတာပါ…။ အသက်နှစ်ဆယ်ကျော်မင်းအတွက် ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေပိမနေစေချင်ဘူး ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ဒီကိုပြန်မလာနဲ့တော့ကွာ ငါလည်းဘွဲ့လက်မှတ်တစ်ခုကိုင်ပြီး ယောင်တောင်ပေါင်တောင်ဆိုပေမယ့် အမေ့ ပါးစပ်တစ်ပေါက်ကို မငတ်အောင်ရှာကျွေးလို့ရပါသေးတယ်… မင်းလည်းကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်အရပ်ကိုခွဲပြီး တခြားတပါးမှာပျော်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ငါသိပါတယ်…. ဒါပေမယ့် လူပီပီသသနေရဖို့ ကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်ဆိုတာ ရေခံမြေခံညံ့တဲ့ငါတို့အရပ်မှာမရှိတော့ဘူး ညီလေးကျန်းမာပါစေကွာ…..။ မိုးလှိုင်ည Posted by
ကောင်းကင်နိမ့်မှ လမင်းကိုဖမ်းမယ်အမှောင်တွေနဲ့မြုံးထောင်လို့....... မျော်လင့်ချက်တစ်သန်းနဲ့စိုက်ပျိုးထားတဲ့ယာခင်းအိုလေး အသီးမတိုးသေးပါလားမိုးတစ်ဖြိုက်နှစ်ဖြိုက်ကျလာရင်တော့ပိတောက်တွေစောပွင့်လောက်ရောပေါ့နွေဦးကလည်းမရောက်သေးပြန်ဘူး...စုဗူးဖောက်ချိန်ရောက်တာတောင်စုဗူးလေးကပြည့်အန်မလာဘူးခက်နေတာကအလွမ်းကောင်းကင်နိမ့်မှ လမင်းကိုဖမ်းတော့မယ်... မိုးလှိုင်ည
သေရာပါအမာရွတ်တွေနဲ့ ကျွန်တော်စွန့်ပစ်ချင်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇
အခုတော့ မင်းဆုတ်ခွာသွားပြီပေါ့ လူတွေက နယူးရီးယားလို့အော်ကြဦးမယ် ငါ့ရင်ဘတ်ထဲမှာတော့ ဒဏ်ရာတွေဗလပွနဲ့ ငါ မင်းကိုနှုတ်မဆက်တော့ဘူး နှစ်သစ်ကိုကြိုဖို့လဲ နှုတ်ဆွံ့နေခဲ့တယ် ငါ့မြေပေါ်မှာတော့ အမှန်တရားရဲ့ကြယ်တွေ အစင်းအစင်းကြွေခဲ့တယ် …၂၀၀၇ ရေ နှစ်ဦးပိုင်းကာလအကျပ်အတည်းမှာ လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်တဲ့ မှောင်ကျကျမြို့ကြီး မျက်ကွင်းတွေဟောက်ပက်နဲ့ မနက်ဖြန်ကိုရင်ဆိုင်မတွေ့ရဲတဲ့ မိသားစုတွေထဲ ငါလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်… ဆန်ဈေးကတက်၊ ဆီဈေးကတက် အလုပ်အကိုင်မဲ့တဲ့သူတွေ… ၀မ်းတစ်ထွာကျောင်းဖို့အတွက် ခါးသီးမှုပေါင်းစုံနေတဲ့လူတွေ အမျိုးကောင်းသားတွေက မလေးရှားသွားကျွန်ခံ အမျိုးကောင်းသမီးတွေက အသွေးအသားနဲ့ဝမ်းရေးကိုဖြေရှင်းဖို့ ရွေးရမလား … ။ လမ်းဆုံလမ်းခွတွေကို ကိုထင်ကျော်ထွက်လာတုန်းက ကုန်ဈေးနှုန်းချပေးပါ … လျှပ်စစ်မီးပုံမှန်ပေးပါ … တိုင်းပြည်အတွက်ကြည့်ကြပါဦး … ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများခင်ဗျား … သူ့ရဲ့သူရဲကောင်းဆန်မှုကို မျက်ရည်စို့အောင်ထောက်ခံမိတယ် ... ။ ဒီလောက်အကျပ်အတည်းတွေကြား စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တာလည်းဂရုမစိုက်ဘူး ဘယ်သူတွေဘာပြောပြော … ဘယ်သူတွေဘာကြောင့်သေသေ ငါနဲ့ငါ့ဆွေမျိုး ချမ်းသာရင်ပြီးရောတဲ့ ကမ္ဘာမှာဓါတ်ဆီဈေးတက်လို့ ငါလည်းတက်တယ်ကွာ ကားတွေကို CNG ပြောင်း ကိုယ့်နိုင်ငံကထွက်တဲ့ CNG ဈေးကိုလည်း ၁၅ ဆ တက်ပစ်တယ် ဆင်းရဲသားအိတ်ကပ်ကိုလည်း ဓါးမြတိုက်ထွက်လာတယ် … ။ အင်္ကျီဖြူတွေလမ်းလျှောက်ထွက်လာတော့ အကြမ်းဖက်သမားတွေ၊ ဆူပူဖျက်ဆီးသူတွေ ၈၈ မျိုးဆက်ဟာ လူယုတ်မာတွေအတွက် မျက်ဖြူဆိုက်စရာ အကြောက်တရား အားလုံးကို ဖမ်းထားလိုက်ကွာ ကိုပေါ်ဦးတို့ ဗကသဟာ ထောင်စောင့်နတ်ကြီးတွေလိုဖြစ်လို့ … သူခိုးဓါးမြခေတ်မှာတော့ လူကောင်းတွေ ထောင်သားဖြစ်တာမဆန်းရှာပါဘူးလေ ပခုက္ကူသံဃာတော်တွေက လူတွေအတွက်လမ်းထွက်လျှောက်တော့ စစ်ခွေးတွေအရိုးကျွေးထားတဲ့ စွမ်းအားရှင်ဆိုတဲ့ မျိုးမစစ်တွေက လက်သံတွေပြောင်လိုက်ကြတာ … ဗုဒ္ဒသားတော် ငြိမ်းချမ်းရေးသမားတွေကိုမှ ဓါတ်တိုင်မှာကြိုးတုပ်ရိုက်သတဲ့ မိုက်ချက်က ကမ်းကုန် ကမ္ဘာစုံအရပ်ရပ်ကမှ ကြားလို့မှနားမခံသာ နှလုံးသားရှိသူတွေတောက်တခေါက်ခေါက် ကျိန်တဆဲဆဲ … ခေတ်သစ်ဒေ၀ဒတ်မျိုးက အစွမ်းကုန် ဆိုးသွမ်းနေပါပေါ့ … ။ သံဃသမ္မဂီရဟန်းပျိုအဖွဲ့က ကံဆောင်သပိတ်မှောက်မှဖြစ်တော့မယ် မင်းဆိုးမင်းညစ်ကို မပဲ့ပြင်မဆုံးမရင် ဗုဒ္ဒသားတော်အဖြစ်က တာဝန်မကျေဖြစ်တော့မယ် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး … လမ်းပေါ်မှာမေတ္တာဝေနေတယ် … ။ မေတ္တာသုတ်ရွတ်ဖတ်တဲ့ကိုယ်တော်တွေ စက်တင်ဘာမိုးရေထဲလျှောက် … ဘ၀သံသရာမှာအဖျားအနာကင်းရလေအောင် … ။ အာဏာရှင်က ဘယ်လိုတွေးလည်း လူစုလူဝေးဖြစ်လာရင် ရိုက်သာသတ်ပစ်ကွာ ငါတို့ရဲ့ အချုပ်အခြာကိုထိပါးလာရင် ဂေါတမလည်းမထားဘူး … ။ ဗုဒ္ဒရှင်တော်မြတ်ပုံတော်ကိုမှ လုံခြုံရေးတပ်သားတွေက ဖျက်ဆီးခြေနင်း သင်္ကန်းနဲ့ကတုံးထဲမှာ မင်းအမျိုးမပါဘူး ရိုက်သာရိုက်တဲ့ … အရက်တိုက်ပြီးလူသတ်ခိုင်း ရွှေတိဂုံခြေတော်ရင်းမှာမှ သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေရဲ့သွေး လွတ်လပ်ရေးအတွက်စတေးခဲ့ရပြီ … ။ သံဃာတော်တွေရိုက်နှက်တော့ ဘောင်းဘီပွ အင်္ကျီပွနဲ့ Rap သီချင်းကြိုက်တဲ့ ကောင်လေးတွေထွက်ချလာတယ် `ဘယ်သူတွေမတရားလုပ်တာလဲ … ´ အဲဒီစကားကြားတော့ စစ်ခွေးတွေက မင်းတို့လား နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာ လည်ပင်းကို စစ်ဖိနပ်နဲ့နင်း ၀ါးရင်းတုတ်နဲ့ရိုက် မြို့လယ်ခေါင်ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာမှ နားထင်သေနတ်ပြောင်း တေ့ဖြုတ်ပြတယ် သေရဲရင်ရှေ့ထွက်ကြကွ ငါတို့လက်ကမနှေးဘူး ပြည်သူကိုခြိမ်းခြောက် … ကြောက်တတ်အောင် လုပ်ရဲလိုက်တာ … ။ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က ပြောဆိုတော့မှ သူတို့က မျက်စိသူငယ် နားသူငယ်ပါ မစုကပဲ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရေးမသုံးဖို့ … အလုံးစုံပျက်သုဉ်းရေးမလုပ်ဖို့ … သူတို့ကို လိုက်လျောဖို့ … အသိအမှတ်ပြု ဆွေးနွေးပါ့မယ် … လူတစ်ရာနှစ်ရာလောက်လမ်းပေါ်ထွက် ဆူပူတာကို နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေက ဓါတ်ပုံအထောက်အထားတွေ ဗီဒီယိုတွေကို မယုံပါနဲ့ သူတိုိ့ကိုပဲယုံပါ … အဲဒါဆို ကုလနဲ့သူတို့လက်တွဲအလုပ်ဖြစ်မှာပါ ဘယ်သူမှမပါဘူး သူတို့စိတ်ကြိုက်ဆွဲထားတဲ့ အမျိုးသားညီလာခံကြီး အတည်ပြုပြီးရင်ပြီးပါပြီ ဒီမိုကရေစီကို လမ်းစဉ်ခုနစ်ရပ်နဲ့ ဖော်ဆောင်နေပါပြီ သူတိုိ့ကိုထောက်ခံကြပါ … လက်နက်ကိုင်မိန်းမလျာပါးစပ်က အသံအမျိုးမျိုးထွက်တယ် … ။ အနှစ် ၂၀ ကျော်သွားပြီ … အဲဒီလောက်အသုံးမကျတဲ့တိုင်းပြည် အဲဒီလိုဆိုးသွမ်းတဲ့ခေတ်တဲ့ ငါ့လူအဖြစ်ကို ရှက်ရွံ့နေဆဲ … ငါမသေခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ ရေ … ငါ့အရင်သေခဲ့တဲ့ သူရဲကောင်းတွေအကြောင်း ငါကဗျာဖွဲ့မယ် … ။ မိုက်ကန်းသူငတေတွေရဲ့ ဇက်ပိုးသားအပေါ် အမှန်တရားရဲ့ဓါးသွားတွေ နီးစပ်လာပြီဆိုတဲ့အကြောင်း … ။ မိုးလှိုင်ည Posted by
သေရာပါအမာရွတ်တွေနဲ့ ကျွန်တော်စွန့်ပစ်ချင်ခဲ့တဲ့ ၂၀...